बाठो किरा लामखुट्टे जसले रक्त समूह छानेर मान्छे टोक्छ (भिडियो)
काठमाडौं । लामखुट्टेले मानिसको रक्त समूह पत्ता लगाउला ? मानिसलाई त रगतको नमूना लिएर प्रयोगशालामा परीक्षण गर्नुपर्छ, लामखुट्टेले कसरी पत्ता लगाउनला मान्छेको रगतको समूह ? तर भर्खरै गरिएको एक अनुसन्धानको रिपोर्टले लामखुट्टेले ओ रक्त समूह भएको मानिसलाई बढी टोक्ने कुरा पत्ता लगाएको छ ।
अमेरिकाको पब्लिक लाइब्रेरी अफ साइन्सका अनुसार लामखुट्टेले टोक्ने कुरा मानिसको जिनमाथि निर्भर गर्दछ । यदि आमा वा बाबुमध्ये एक वा दुवैलाई लामखुट्टेले धेरै टोक्छ भने हुनसक्छ, तपाईंलाई पनि लामखुट्टेले धेरै टोक्नसक्छ । यस्तै भाइबहिनीको सम्बन्धमा पनि हुन्छ, किनकी रगतको नाता भएपछि जिन्स भाइबहिनी वा दाजु दिदीमा पनि बाबुआमाको मिल्छ ।
वैज्ञानिकहरुका अनुसार, लामखुट्टेले हाम्रो रगतबाट प्रोटिन लिन्छ । एक अनुसन्धानका अनुसार, ओ रक्त समूह हुने मानिसलाई ए रक्त समूहको तुलनामा दुई गुणा लामखुट्टेले टोक्दछ । यसरी नै बि रक्त समूहका मानिसलाई लामखुट्टेले कम नै टोक्दछ ।
यसबाहेक जुन मानिसलाई धेरै पसिना आउँछ, उसलाई धेरै लामखुट्टेले टोक्छ । पसिनामा ल्याक्टिड एसिड, युरिक एसिड, अमोनिया जस्ता तत्व हुन्छ, जसबाट लामखुट्टे छिट्टै आकर्षित हुन्छ । यसैकारण हो, शारीरिक अभ्यास गरेको बेला लामखुट्टेले धेरै टोक्दछ ।
यसकारण टोक्दछ लामखुट्टेले मानिसलाई (भिडियोसहित)
कफी पिउनुका लाभहरु यस्ता छन्
कोरोना आतंकः चीनका आठवटा शहरको आवागमनमा बन्देज
चरक मेमोरियल अस्पतालमा कपाल प्रत्यारोपण सेवा सुरु